देशदृष्टि – Page2– Blog by Milan Bagale
छिमेकी राष्ट्र भारतकी वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले आर्थिक वर्ष सन् २०२२/२३ का लागि भारतीय संसद्‍मा बजेट पेस गरिरहँदा नेपालमा पनि त्यसको स्वाभाविक चासो थियो। ठूलो देश, ठूलै बजेट । ठूलै बजेटभित्र हाम्रो नामपनि आयो । नाममात्र किन, सस्यानो हिस्सा नै आयो । पोहोरभन्दा अलि कम । बजेटमै छिमेकीको लागि हिस्सा छुट्याइने गरेको विषयले पोहोरपरार त्यति चर्चा पाएको थिएन । यसपालि अचम्म भयो। नेपालले भारतबाट पाउने बजेटमा आम चासो निकै देखियो। भारतको बजेटमा नेपालबाहेक भुटान, अफगानिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका र माल्दिभ्सले आ-आफ्नो ‘हैसियत’ अनुसारको हिस्सा पाउने भएका छन्।
भारतको बजेट भाषणमा घोषणा भएअनुसार यो आर्थिक वर्षमा नेपालले भारतबाट ७ अर्ब ५० करोड भारु (करिब १२ अर्ब नेरु) पाउनेछ। सबैभन्दा धेरैचाहिँ भुटानको भागमा परेको छ। उसले २२ अर्ब ६६ करोड भारु पाउने भएछ।
भारतले आफ्नो बजेटमै नेपालको लागि हिस्सा छुट्याइरहँदा नेपाल भने यतिबेला अमेरिकी सहयोग नियोग, मिलेनियम च्यालेञ्‍ज कर्पोरेसन (एमसीसी)बाट पाउने ५० करोड अमेरिकी डलर (करिब ६० अर्ब नेपाली रुपैयाँ) लिन्न, खान्न, चाहिन्न भन्दै अमेरिकासामू ‘राष्ट्रवादी’ घुर्की लगाइरहेको छ। ‘राष्ट्रवादी’ र ‘राष्ट्रघाती’ भन्ने एकापसको आरोप-प्रत्यारोपले सामाजिक सञ्जालमात्र होइन, टोलटोलका चिया पसलसमेत तातेका छन्। यो वर्षको जाडो यही बहसले लैजान्छ कि जस्तो देखिएको छ। विदेशी अनुदानको पैसो चाहिएन भन्ने ‘राष्ट्रवादी’ घुर्की फस्टाएकाले नै होला, भारतको बजेटमा नेपालले आफ्नो हिस्सा पाएको खबर सबैतिर बाक्लोगरि छाएको छ।
एमसीसी के हो? ‘राष्ट्रवादी’हरुले यसको जवाफ एक शब्दमै दिन्छन्। राष्ट्रघात! यो त पढ्नै नपर्ने, बुझ्नै नपर्ने, सुन्नै नपर्ने, जान्नै नपर्ने, हेर्नै नपर्ने, आधिकारिक दस्तावेजमा लेखेको कुरो पत्याउनै नपर्ने अकाट्य सत्यजस्तो भएको छ। युट्युब र टेलिभिजन च्यानलमा छाएका एकाध उग्र अन्तर्वार्ताहरु एमसीसी विरोधीका लागि भिटामिनजस्तो भएका छन्। ‘एमसीसी आए अमेरिकी सेना, सैन्य जहाज र हेलिकप्टरमार्फत् फुत्तफुत्त झरिहाल्छ, नेपाललाई क्वाप्पै खाइहाल्छ’ भन्ने भूत ‘राष्ट्रवादी’हरुका मनमनमा सवार भएको छ। ‘राष्ट्रवादी’ नेताहरुले पेलपाल पारेर एमसीसी धकेल्न सके भने त नेपाल बचिगो। देश रहे न बाटो बनाउने, बिजुलीको तार तान्ने। एमसीसी समर्थकहरु यतिबेला कम्मर कसेर देश बचाउन लागिपरेका छन्। उनीहरुसँग अनेक मिथ्यांक छ। त्यो मिथ्यांक सामाजिक सञ्जालभर छरपष्ट छ।
नेपालमा एमसीसीबारे तटस्थ धारणा राख्ने व्यक्ति पाउन गाह्रो छ। ‘एमसीसीसम्बन्धी आधिकारिक दस्तावेज पढेँ, वेबसाइटमा हेरेँ’ भन्ने व्यक्ति त विरलै भेटिन्छन्। पढ्न पो किन पर्‍यो र? दस्तावेजमा लेखे पनि, नलेखे पनि एमसीसी आएपछि अमेरिकाले नेपाल क्वाप्प खाइहाल्छ भन्ने भ्रम बाक्लोसँग फिजिएको छ। सिंगो देश एमसीसीको घोर विरोधी र मौन समर्थकमा विभक्त छ। एउटै घरभित्र कोही विरोधी छन् त कोही समर्थक। बाबु एमसीसीको विरोधमा चर्काचर्का नारा सामाजिक सञ्जालमा लेखिरहेका भेटिन सक्छन्, तिनकै छोराछोरी समर्थक भेटिन सक्छन्। घोर विरोधीहरुको स्वर निकै चर्को छ, किनकि उनीहरु ‘राष्ट्रवादी’ कित्तामा उभिएका छन्। समर्थकहरुको आवाज मलिन छ, किनकि एमसीसीको समर्थन गर्नेहरुलाई ‘राष्ट्रवादी’हरुले ‘राष्ट्रघाती’को बिल्ला भिराइहाल्छन्। डलर खाएको, देश बेचेको, विदेशीको पैसामा विकेको, राष्ट्रघात गरेको आदि अनेक रेडिमेड आरोपको लामो सूची बोकेर उनीहरु बसेका छन्।
एमसीसी विरुद्धमा ‘राष्ट्रवाद’ जगाउने फिल्ड कमाण्डरहरु धेरै छन्। अलि प्रस्टसँग देखिने, सुनिने र पढिने पात्रचाहिँ भीम रावल भएका छन्। पूर्वगृहमन्त्री तथा एमालेका सांसद भीम रावल। एमसीसीको विरोध गरेर ‘राष्ट्रवादी’ नेताको छवि बनाएका रावल आफ्नो छवि धमिलिन नदिन कम्मर कसेका छन्। टेलिभिजन अन्तरवार्ता, सामाजिक सञ्जालदेखि सांसदलाई चिठीसम्म। उनलाई भ्याइनभ्याइ छ।
सिंगो समाजमात्र किन, नेपालका राजनीतिक दलहरु पनि आफ्नो स्वार्थअनुरुप एमसीसीबारे धारणा राख्न अभ्यस्त भइसकेका छन्। पहिल्यैदेखि नै यसबारे बोली नफेर्ने नेतामा शेरबहादुर देउवा र बाबुराम भट्टराई पर्छन्। सत्तामा छँदा खरो समर्थक भए पनि अहिलेचाहिँ केपी ओली एमसीसीको ‘राजनीति’ गर्ने पक्षमा छन्। पास वा फेल केही नभन्ने। आफ्नो आवश्यकता अनुसार यसलाई चुनावी मसला बनाउने। पुष्पकमल दहालको रणनीति पनि प्रस्टै छ। पास पनि हुन नदिने, फेल पनि हुन नदिने। यसो बिरामी परेको बेलामा वा घुम्न मन लागेको बेलामा अमेरिका जाने बाटो नथुन्ने। सभामुख लगाएर संसद्‍मा एमसीसी टेबल हुनै नदिने। त्यति भएपछि पास-फेलको झन्झटमा फस्नै परेन। तर, यो अवसर पनि अब नराम्ररी पातलिएको छ। शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहालद्धारा प्रेषित एमसीसी संसद्‍बाटै पास गर्ने लिखित प्रतिबद्धतापत्र डिजिटल पत्रिकाहरुमार्फत् सार्वजनिक भएको छ। बाहिरबाहिर पास गर्दिनँ भन्ने, भित्रभित्र गोप्य चिठी लेख्ने। अब कार्यकर्तालाई के जवाफ दिने? चिठी पठाएको छैन भन्ने? पत्र त झन् पठाएकै छैन भन्ने? यस्सो लेटरमात्रै लेखेको हो भन्ने? हस्ताक्षर नक्कली हो भन्ने? सही त गरेकै छैन भन्ने? यस्सो साइनसम्म त गरेको हुँ भन्ने?
माधव नेपालको रणनीति अझ रमाइलो छ। झलनाथ खनाललाई एमसीसीका कागज पढ्न लगाइरहने। खनालचाहिँ अध्ययन गर्दैछौं गर्दैछौं… हेर्दैछौं… कागज केलाउँदैछौं… भनिरहने। अर्थात् भीम रावल खरो ‘राष्ट्रवादी’ बन्ने, शेरबहादुर देउवा र बाबुराम भट्टराई खरो ‘राष्ट्रघाती’ बन्ने, केपी ओली ‘राष्ट्रवादी’ र ‘राष्ट्रघाती’ दुवै नबन्ने। चुच्चे नक्सा बनाएको जिउँदोजाग्दो जश उनीसँग छँदै छ। यति भएपछि राष्ट्रवाद र राष्ट्रघातको खेलमा किन फसिरहने? पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालचाहिँ कतै ‘रिस्क’ नलिने। एउटाले संसद्‍मा पेस गर्नै नदिने, अर्कोचाहिँ निरन्तर अध्ययन गरिरहने। एमसीसीका नाममा गजब रमिता चलिरहेछ। सायद अमेरिका आफैं छक्क परिरहेछ। दिन्न भनेर फनक्क फन्किएर हिँड्न पनि नमिल्ने। त्यति भए चीन खुसी होला भन्ने पीर छ। लाउ, खाउ, लिउ.. भन्दै सधैं पछिपछि हिँड्न पनि नमिल्ने।
एमसीसी फेल गरेर अमेरिकालाई देखाइदिनुपर्छ भन्ठान्ने ‘राष्ट्रवादी’लाई नेपालले पनि उत्तर कोरियालेझैं थरीथरी क्षेप्यास्त्र बनाएर डाँडाकाँडामा ड्याम कि ड्याम पड्काए हुन्थ्यो, अमेरिका र भारतलाई थररररर…. बनाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्दो हो। सिंगो देश भोकै राखेर एउटा मोटो मान्छेले निरन्तर बारुद ओकलिरहेको दृश्य नेपालीका लागि बडो गज्जब लागिरहेको छ। आफ्नो देशमा पनि त्यस्तै कोही ‘राष्ट्रवादी’ नेता जन्मिदिए हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ। राष्ट्रवादको त्यो कोरा सपनामा भीम रावलहरुले धेरथोर मलजल गरिरहेका छन्।
राष्ट्रवादको त्यही कोरा भावुकतामा डुबेर ‘जोन्सन एण्ड जोन्सन’ खोप लगाएको पाखुरा सुर्कंदै नेपाल एमसीसी मुर्दावाद… मुर्दावाद… भनिरहेछ। एमसीसीको जरा नेपालीको मनमनमा ख्यालख्यालमै गडिसक्यो। रावल र दाहाललाई राष्ट्रवादको खोक्रो खोल चुनावमा खुबै काम लाग्छ भन्ने राम्ररी थाहा छ। रावल र दहाललाई सरकारी गाडी मन पर्ने, राजमार्गको स्तरोन्नतीचाहिँ किन मन नपर्ने रहेछ? उनीहरु चढ्ने गाडी धेरै महँगो र बलियो भएकाले बाटो राम्रो बनाउने परियोजना मन नपरेको हो कि? आफ्नो गाडी जस्तो बाटोमा पनि गुड्न सक्छ भन्ने आत्मविश्वास भएकाले हो कि? अनि बिजुलीको ट्रान्समिसन लाइन बन्नु हुँदैन भन्ने उनीहरुलाई किन लाग्दो रहेछ? ट्रान्समिसन लाइन बनाएर अन्त बिजुली बेचे आफ्नो घरमा बत्ती जान्छ भन्ने डर भएकाले हो कि? कसैले त्यस्तो डर देखाइदिएको छ कि? उग्र राष्ट्रवादको खोक्रो खोललाई त भारतले छुट्याइदिएको १२ अर्ब नेरुले गिज्याइरहेको छैन र?
भारतले छुट्याइदिएको बजेटमात्र किन, नेपाललाई विदेशी पैसाले गिज्याउने अर्को पनि खबर एकै दिन खप्टिएको छ। २०७८ माघ १८ गतेकै खबरअनुसार नेपालले विश्व बैंकबाट १५० मिलियन डलर अर्थात् १७ अर्ब ६९ करोड ऋण पाउने भएको छ। नेपालका सहरी क्षेत्रका स्थानीय तहको शासकीय सुधार एवं पूर्वाधार विकास गर्न विश्व बैंकले उक्त ऋण दिने भएको हो। ऋणमाथि ऋण थपिरहने। छिमेकीले आफ्नो बजेट भाषणमै सहायता रकम घोषणा गरिदिँदा थपडी बजाउने अनि आफैंले आवेदन दिएर लामो प्रक्रिया पार गरेर हात पर्न लागेको पूर्वाधार विकासको पैसो धपाउन अनेक मनचिन्ते ‘राष्ट्रवादी’ नारा फुराउन नेपाली नेतालाई अप्ठ्यारो लाग्नुपर्ने हो। अमेरिकालाई धपाउन सकेको बहादुरीको ‘जश’ लिने ‘राष्ट्रवादी’ सपना देशको हितको लागि घातक हुनसक्छ भनेर उनीहरुले सोचेका छैनन्।
अरुको सहयोग लिने होइन, दिने बन्न सकेको दिन कति रमाइलो हुँदो रहेछ भन्ने अनुभव नेपालले पनि यदाकदा गर्न पाएको छ। २०७८ माघ २ गते नेपालले अफगानिस्तानमा मानवीय सहायतास्वरुप १० टन सामान जहाज चढाएर पठायो। पैसा भएको भए अफगानिस्तानमा नेपालले विद्यालय भवनहरु बनाइदिन्थ्यो होला। भारतका दुर्गम ठाउँका लागि एम्बुलेन्स दिन्थ्यो होला। अन्त पनि अनेक सहयोग गर्थ्यो होला। यतिबेला नेपाल दिने होइन, लिने हैसियतमा छ। ऋणको भारीभन्दा पूर्वाधार विकासका लागि आउने अनुदान कम हानिकारक छ भन्ने कुरा ‘राष्ट्रवादी’ नेपाली नेताले बुझेका छैनन् र? उनीहरुले एमसीसीको कागजपत्र पढेका छैनन् र? राष्ट्रवादी बन्ने नाममा उनीहरु उग्र बनिरहेका छन्। समाजलाई भड्काइरहेका छन्। उग्र राष्ट्रवादको खोक्रो खोल देखेर देश भ्रमित भइरहेको छ र त निरन्तर बाटोघाटो मुर्दावाद… बिजुलीको तार मुर्दावाद… को नारा घन्किरहेको छ।
एमसीसीसँग हाम्रो भू-राजनीतिक सन्तुलनको संवेदनशीलता पनि जोडिएको छ। योबारे सामाजिक सञ्जालमा आएका थोरै मतमध्ये पत्रकार कनकमणि दीक्षितको मत सापटी लिन्छु- ‘नेपाललाई बीआरआई पनि चाहिन सक्छ एमसीसी पनि, आफ्ना अत्यावश्यक संरचना निर्माण गर्न। न अमेरिकाले बीआरआई नलेऊ भनेर दबाब दिन मिल्छ, न चीनले एमसीसीविरुद्द प्रोपगाण्डा छेड्न। ग्रहण गरौं, अस्वीकार गरौं, नेपालको निर्णय आफ्नो सार्वभौम संसद्‍बाट, ‘गठबन्धन’को गुम्सिएको कोठाबाट होइन।’
हो, गठबन्धन गुम्सिएको कोठाबाट निस्कन जरुरी छ। सभामुखले आफ्नो पदीय हैसियत र मर्यादा भुलेर टेबल गर्नै नदिने नियत राख्नु अत्यन्त आपत्तिजनक छ। संसदभित्र हुने छलफलको बाटो बन्द गर्न कहाँ पाइन्छ? ठीक, बेठीक के छ, संसद्‍ले भनोस्। पास या फेल के गर्ने, संसद्‍ले गरोस्। आफ्नो विवेकसँगै संसद्‍लाई पनि बन्धक बनाएर ‘राजनीति’ गर्नु उचित होइन।
एमसीसी ठीक हो कि गलत? आफ्नै विवेकले जाँचौं। आफैं आधिकारिक कागज पढौं। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेरौं। फेसबुकको लहरो समातेर आएका नक्कली ‘खबर’को पछि नलागौं। अनि बल्ल जिन्दावाद… मुर्दावाद… या अरु के-के वाद हो त्यही वाद भनौं। एमसीसीको नाममा ५० करोड डलरको पोको च्यापेर अमेरिकी सेना लडाकु जहाजबाट फुत्त ओर्लिंदा हुत्त मिसाइलले हानेर धपाउने ‘राष्ट्रवादी’ दिवास्वप्नबाट मुक्त होऔं। एमसीसीको छलफल संसद्‍मै होस्। जनप्रतिनिधिले विवेकपूर्ण र सन्तुलित निर्णय गर्न सकून्। नेपाललाई फाइदा नहुने कुरा कागजमा छन् भने अमेरिकालाई निर्धक्क सुनाउन सकून्। बाहिरबाहिर हल्ला गरेर बस्ने होइन, संसद्‍मा सल्लाह गरेर जे गर्दा नेपाललाई फाइदा हुन्छ, जनप्रतिनिधिले त्यही गरुन्। त्यसो गरे उनीहरुको जय होस्।
(२०७८ साल माघ २३ गते नेपाल लाइभमा प्रकाशित लेखलाई सामान्य परिमार्जन गरिएको)
पढ्ने फुर्सद सकिएर
मान्छे मोवाइलतिर झुत्ति खेलेपनि
शहरमा अखबार छापिन छोडेको छैन ।
कागज र मसीले मात्र
कहाँ अखबार बन्छ ?
अखबारको रखबारी गर्न
अलिकति समाचार र विचार चाहिन्छ ।
त्यसलाई पस्किने विवेक चाहिन्छ ।
समाचार र विचार दुब्लाएर
आफैं बेखबर हुन लागेको अखबारमा
समाचार उस्तै रहेछन् ।
गज्याङगुजुङ राजनीतिको झुसिलो स्वाद
सिडिओको जोरविजोर आदेशले
भीडमा च्यापिएको कोरोना
बारीबाट बजारमा पुग्न नसकेका तरकारीको रास
आकासिँदो सुनको भाउ
र ओरालो झरिरहेको शेयर बजार ।
कोरोना र शेयरबजारबाहेक
सबैथोक उस्तै रहेछन् ।
शहरमा अखबार चाहिनु
बजार बजारमा अखबार पाइनु
अखबार पढ्ने मान्छे पाइनु
आफैंमा ठूलो खबर हो ।
पुस्तक पसलअघि उभिएर
मैले अखबार पढिरहेको खबर
कुनै अखबारमा आउला ?
(२०७८ साल माघ १४ गते शुक्रबार)
‘देशमा राजनीतिक समस्या असाध्यै चर्कियो । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको बोलचालै हरायो । संसद् ठप्पको ठप्प भएपछि देश कसरी चल्छ ? अदालतको हालत उस्तै । प्रधानन्यायाधीश टसको मस भएनन् । कसैले कसैको अस्तित्व नै स्वीकार्ने भएनन् । यसरी कसरी देश चल्ला ?’ चलनचल्तीका मानवअधिकारवादीले खुइय गरे ।
यसरी खुइय गरेर पनि हुन्छ ? अर्का मानवअधिकारवादीले सुस्तरी सम्झाए ।
‘वार्ता गराउने । मध्यस्तता गराउने । कुरो मिलाउने । देश चलाउने’ वयोबृद्ध नागरिक अगुवा जोशिए । कसरी वार्ता गराउने ? कसरी कुरो मिलाउने ? एकैचोटि दुइटा प्रधानमन्त्री बनाउने ? कवि अगुवाले सोधे । ‘परिआए बनाउने ।’ चलनचल्तीका अधिकारवादीले ठुस्स परेझैं जवाफ दिए ।
अधिकारकर्मीहरु घनघोर छलफलमा लागे । नेताहरुलाई भेटाउने । सम्झाउने । चरण चरणमा वार्ता गराउने । देशलाई निकास दिने ।
जेनेभा, दिल्ली, हापुरे, सिक्लेस, गोदाबरी रिसोर्ट, बर्दिया…. अनेक विकल्पमा छलफल भए ।
– जेनेभा र दिल्ली लान सकिँदैन । हापुरे र सिक्लेस जान ओली मान्दैनन् । प्रचण्डसँग वार्तै गर्दिनँ भन्लान् भन्‍ने डर छ, त्यसमाथि सिक्लेसको नाममात्र लियो भने पनि बिच्केलान् भन्‍ने डर ।
– यसो गरौं न त । यसपालि जनकपुर लैजाऔं । जनकपुरको धर्मशालामा लगेर मिथिला भोजन खुवाउँदै वार्ता गराऔं ।
– यो चिसोमा जनकपुर झर्न मान्लान् र ? कसैले प्रश्न गर्‍यो ।
‘पक्कै मान्लान् । चिसो हुने गरिब गुरुवालाई हो । नेतालाई केको चिसो ? कताबाट पस्छ चिसो ? आगो, हिटर, एसी, थर्मस, तातोपानी सबैथोक भएपछि चिसोलाई च्यालेन्ज गरिहाल्छन् नि ।’ कसैले जवाफ दियो ।
मध्यस्थकर्ताहरुले सुरुमा मझौला नेताहरुसँग वार्ता गरे । उही पुराना वार्ताकार महरा, ज्ञवाली, सिटौलाहरु काम लागे । यसपालि शेखर र वामदेवहरु काम लागेनन् । मझौलाबाट सकारात्मक संकेत पाएपछि अधिकारकर्मीहरु बालुवाटार, बालकोट, कोटेश्वर र खुमलटारतिर दौडिए । सुरुमा केपी ओलीले वार्ता गर्ने प्रस्ताव मान्दै मानेनन् । मझौला नेताले मनाएपछि वार्ता गर्न तयार भए । जनकपुर जाने कुरामा त सबै सहमत भए । कसैले नाइँनास्ती गरेनन् ।
के चढेर जाने ? विवाद भयो ।
प्रम देउवाले भने- सेनाको हेलिकोप्टरमा डबल इन्जिन हुन्छ । त्यही मात्र चढ्न मिल्छ ।
ओलीले भने- म त क्याप्टेन थापासँग जाने हो ।
प्रचण्डले भने- म त देउवाजीसँगै जाने हो । ओलीसँग जान्‍नँ ।
माधवले भने- म पनि ओलीसँग जान्‍नँ । थापाको घरमा मलाई वार्तामा बोलाएर धोका दिएको बिर्सेको छैन ।
जनकपुरमा वार्ता गर्ने भनेपछि उपेन्द्र यादवले पनि भाउ पाए । बादल र बाबुरामलाई चाहिँ कसैले वास्तै गरेन । बाबुरामले अन्टसन्ट ट्वीट गरिरहे ।
थरीथरी हेलिकोप्टर चढेर जाँदा सकारात्मक सन्देश जाने भएन । सबैले अडान नछोडे पनि मानव अधिकारकर्मीले उपाय निकाले- ‘नेपाल एअरलाइन्सको जहाजमा जाने ।’
हिमालयमा मिल्दैन ? ओलीले फ्याट्ट सोधे।
जनकपुरमा बोइङ बस्न नसक्ने जानकारी पाएपछि ओली नेपाल एअरलाइन्समा जान तयार भए । तर उनले सर्त राखे- प्रधानमन्त्री पछाडिको सिटमा बस्छु । आडमा माधव र प्रचण्डलाई राख्न पाइन्‍न ।
प्रचण्ड ठुस्स पर्दै तेस्रो लहरमा बसे । पहिलो लहरमा देउवा, दोस्रो लहरमा ओली । माधव केही नबोली चौथो लहरमा बसे । सबै नेतासँग एक-एकजना मानव अधिकारकर्मी बसेका थिए ।
नेताहरु जनकपुर विमानस्थलमा ओर्लिए । कोरोनाका कारण फूलमालाको व्यवस्था गरिएन । अलिअलि पत्रकार आए । फोटो खिचे । फर्किए । खासै उत्साह देखाएनन् । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत चाहिँ हँसिलो अनुहारसहित उपस्थित भए । सकेको खातिरदारी गरे । उनले सबैलाई जानकी मन्दिर नजिकको धर्मशालामा लगे ।
लगातार ५ दिन बैठक बस्यो । पत्रकारहरु बाहिर निर्णय पर्खिरहे ।
बाहिर सूचना चुहिने क्रम जारी थियो । भित्र निकै चर्काचर्की, घोचपेच, भनाभन र बाझाबाझ चलिरहेको थियो । देउवा मौन थिए । ओली र प्रचण्ड सुरुमा अलिअलि बाझे अनि सामसुम भए । माधव नेपाल र ओलीका बीचमा चाहिँ निकै छेडछाड चल्यो । ५ दिनसम्म बाझेपछि अन्तिम दिन मानवअधिकारवादीहरु उनीहरुको हात मिलाउनसम्म सफल भए तर अनुहार ठुस्सको ठुस्स नै रह्यो ।
दलहरुलाई मिलाउन मानव अधिकारबादीहरुले प्रस्ताव राखे- जोरविजोर सरकार चलाउने ।
ओलीले भने- हुन्‍न । चुनावपछि बहुमत ल्याइहाल्छु । अहिलेलाई केही चाहिएन ।
देउवाले भने- त्यसो भए संसद् र अदालत खोल्नुस् न त । एमसीसी खोल्नुस् न त ।
ओलीले भने- त्यो पनि हुन्‍न ।
त्यसो भए के हुन्छ त ए बाबा ? देउवा जंगिए ।
केही पनि हुन्‍न । ओली पनि जंगिए ।
वार्ता धन्‍नै भाँडियो ।
मानवअधिकारवादी कस्सिए । थामथुम थामथुम पारे ।
अन्तमा निकास निस्कियो- जोरविजोर सरकार चलाउने । जोर गते ओलीको सरकार । विजोर गते देउवा-प्रचण्ड-माधव गठबन्धनको सरकार ।
संसद्को बैठक बसेर संविधान फेरियो । आगामी चुनावसम्म देशमा जोरविजोर सरकार चल्ने भो ।
जोर प्रधानमन्त्रीका रुपमा ओलीले र विजोर प्रधानमन्त्रीका रुपमा देउवाले पुनः शपथ लिए । मन्त्रिमण्डल पनि जोरविजोर भए । गाडी पनि जोरविजोर व्यवस्थाअनुसार नै मिलाइयो । प्रधानमन्त्री र मन्त्री निवासका कोठाहरुमा नम्बर लगाइयो । जोर कोठाहरु जोर मन्त्रिमण्डललाई र विजोर कोठाहरु बिजोर मन्त्रिमण्डलका सदस्यलाई दिइयो । गार्ड, सहयोगी, कर्मचारी सबैलाई जोरविजोर झल्काउने पोसाक दिइयो । संसद्मा कुर्सी व्यवस्थापन पनि उस्तै भद्रगोल भयो । आज सत्तापक्ष । भोलि प्रतिपक्ष । सबै थोकमा सबैजना झुक्किन थाले ।
जोरविजोर सरकारले नेता व्यवस्थापन त गर्‍यो तर बाँकी चीज भद्रगोल भए ।
– कार्यालय र कर्मचारी व्यवस्थापन भद्रगोल भयो । एउटालाई मन पर्ने फर्निचर एउटालाई मन नपर्ने भयो । मन्त्रीको कार्यालय नै पार्टेसन गरेर अलग अलग कार्यकक्ष बनाइयो । कर्मचारी पनि जोर-विजोर सरकार अनुरुप व्यवस्थापन गरियो ।
– जोर मन्त्रिमण्डलको निर्णय विजोर मन्त्रिमण्डलले र विजोर मन्त्रिमण्डलको निर्णय जोर सरकारले उल्टाउन थाल्यो । हरेक दिन यो तमासा चल्यो । नागरिक रनभुल्लमा परे । देश कसरी चलिरहेको हो, बुझिनसक्नु अवस्था आयो ।
– जनतासामु को बढी लोकप्रिय हुने भन्‍ने होडबाजी चल्यो । दुबै सरकारले असम्भव-असम्भव घोषणा गरिदिन थाले । पैसा ह्वारह्वारर्ती बाँड्ने घोषणा भए । एक महिनामै देशको ढुकुटी रित्तिन थाल्यो । अलि दिन त नागरिक मख्ख परे । त्यो खुसी धेरै दिन टिकेन । खर्च अभावमा सरकारी अस्पताल, क्याम्पस, कार्यालय सबै बन्द हुने अवस्था आयो ।
– अघिल्लो दिन प्रधानमन्त्री, भोलिपल्ट आन्दोलनकारी । अघिल्लो दिन आन्दोलनकारी, भोलिपल्ट मन्त्री । पर्सिपल्ट फेरि आन्दोलनकारी । यो लुकामारीले सुरक्षाकर्मी पनि आजित भए । आज भाँटा हान्यो, भोलि सलाम हान्यो । उनीहरु पनि लज्जित भए ।
जोरविजोर सरकारको चरम तमासा देखेपछि आम नागरिक मात्र होइन, पूर्णकालीन कार्यकर्ता पनि आजित भए । राजनीतिक दलका आन्दोलन, सभा र विभिन्‍न कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु मात्र देखिन थाले । चिया पसलमा, सामाजिक सञ्जालमा, पत्रपत्रिका, टिभी र रेडियोमा राजनीतिका समाचार आउनै छोडे ।
नेताका फोटा देख्नु दुर्लभजस्तै हुन थाल्यो । पत्रकारहरु हत्तु भएर राजनीतिक समाचार कभर गर्नै छोडिदिए । नागरिकले चासो दिनै छोडेपछि त्यस्ता समाचारको पछि लागेर के हुनु ? देशमा को प्रधानमन्त्री र मन्त्री छ भन्‍ने थाहै हुन छोड्यो । कोरोना, खेलकुद, कृषि, घुमघाम, स्वास्थ्य, खानपिन, सिनेमा, संगीत, साहित्य, नाटकमा नागरिकको चासो बढ्यो ।
सबैले वास्ता गर्न छोडेपछि नेताहरु बल्ल गले । जोरविजोर दुवै सरकार विघटन भए । जोरविजोर सरकार विघटन भएको खबर कुनै छापाले छापेनन् । कुनै टिभीमा पनि समाचार देखिएन । कुनै एफएममा पनि बजेन । नेताहरुले सामाजिक सञ्जालमा सो खबर राख्दा कसैले पनि लाइक गरेन । सत्ताको होडबाजीबाट नेताहरु थाकेजस्तो छ । अब चाहिँ नेपाल बन्ला कि ? नेताको बेवारिसे स्टाटसमुनि एक हप्तापछि कसैले कमेन्ट गरेको देखियो ।
(२०७८ साल माघ ८ गते इकागज डटकममा प्रकाशित)
हिजोआज राजनीतिक रूपमा शान्त देश कोरोना संक्रमणका कारण अशान्त छ। कुनै जमानामा कोरोनाका कारण मुलुक जतिसुकै आक्रान्त भएपनि बालुवाटार बेखबरजस्तो देखिन्थ्यो। आमनागरिक बालबालिका बोकेर असाध्यै कष्टसाथ १५०—२०० किलोमिटर लामो पैदलयात्रा गरिरहँदा बालुवाटारमा कुर्सी राख्ने शैली र त्यसको बनावट, टेबुलपोस र नम्बर लगाइएका पानीका बोतलका नाममा प्रतिस्प्रर्धा चलिरहेको हुन्थ्यो। त्योभन्दा पनि पर जुत्ता छोप्ने जालीजाली परेको निलो कभरले सबैको ध्यान तान्थ्यो।
जुत्तामा कभर लगाएर, मुख खुल्लै राख्दै पार्टीका मिटिङ, भेला निकै बाक्लो गरी हुन्थे। नेताहरू कोठाकोठामा मुख फुलाएर बसेका हुन्थे। एउटा कोठाले अर्को कोठालाई कारबाही गर्छु, पार्टीबाटै निकाल्छु, स्पष्टीकरण लिन्छु भनिरहन्थ्यो। आमनागरिक रित्तो अक्सिजन सिलिन्डर र खाना पकाउने एलपी ग्याँसको रित्तो सिलिन्डर बोकेर यता र उता भौतारिइरहेका हुन्थे। देशमा कोरोनाभन्दा ठूलो समस्या तत्कालीन नेकपाको विवादजस्तो थियो।
विवाद खेलेपछि बचेको समयमा प्रधानमन्त्री बेसारपानी र अदुवापानीको भाषण छाँट्थे। हिमाली हावापानी र हाम्रो ‘इम्युनिटी’को बखान संसदमै गर्थे। ‘विज्ञानले किन भनिरहनु पर्‍यो, मैले भनेको मैले’ भन्दै सगर्व घोषणा गर्थे।
तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस प्रधानमन्त्रीको लाचार छायाँजस्तो देखिन्थ्यो। कतै चीर निन्द्रामा सुतेजस्तो लाग्थ्यो। उल्टै बालुवाटारतिर पसेर भागबण्डाको बार्गेनिङ गरिरहेको भनेरपनि खबर आउथ्यो ।अराजकताले हद नाघेको त्यो समयमा नेताहरुलाई कोरोना नलागेको देख्दा अचम्म लाग्थ्यो। मास्क नलगाए पनि, भीडभाड गरेर हिँडे पनि आन्दोलनमै उत्रिए पनि कसरी जोगिएका छन् हँ? कोरोना प्रुफ भएकोले जोगिएका हुन् कि? बेसारपानी खाएरै जोगिएका हुन् कि? कोरोनासँगै हिसाबकिताब मिलाएर जोगिएका हुन् कि? स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीको भागै खोसेर खोप लगाएकाले जोगिएका हुन् कि? उनीहरु जोगिनु आफैमा एउटा आश्चर्यजस्तो थियो। सुतेको प्रतिपक्ष होस् या सडकमै जागेको सत्तापक्ष, सबैतिर एकछत्र सञ्चो थियो। घोर अचम्म थियो।
यसपालि हावापानी वा बेसारपानी के–कसो नमिलेर हो, एकपछि अर्को गर्दै ठूल्ठूला नेताहरु कोरोना संक्रमित भए। भनिरहनु परेन, त्यो सबै एकपछि अर्को गर्दै ओइरिएको महाधिवेशनको कमाल हो। मास्क लगाए इज्जत जान्छझैं मुख खुल्लै राखेर भेला र मेलामा रमाएका धेरै नेता यतिबेला कुना पसेका छन्।
उनीहरु कुना पसेसँगै कोरोनाले आहत मुलुकलाई मलम लगाएजस्तो पो भएको छ। चाहिँदो नचाहिँदो राजनीतिक घोचपेच, सस्ता भाषण, बेअर्थको दौडधूप, गुटका भेला र सत्ता तानातानका खेल पढ्न, सुन्न परेको छैन। नेता बिरामी पर्दा जनताले सञ्चो मान्नु पटक्कै राम्रो हैन। कोही बिरामी पर्दा कसैले सञ्चो मान्नु नराम्रो कुरा हो। झन् देशका अगुवा बिरामी पर्दा त आपतकालमा धेरै अप्ठेरो पर्नुपर्ने हो। ‘नेता बिरामी परे, अब हामीलाई कसले हेर्छ?’ भन्ने दिन आए पो! त्यस्तो दिन उनीहरु आफैँले ल्याएनन्। बिरामी परेका नेताहरु सबैलाई स्वास्थ्यलाभको एकमुष्ट कामना।
यति बेला एमाले सत्ताबाट हुत्तिएर प्रतिपक्षमा पुगेको छ। तर, सचिव योगेश भट्टराईले मुख खुला र जुत्तामा कभर राखेर उही पुरानो एमालेको झल्को दिए। प्रधानमन्त्री देउवालाई कोरोना नियन्त्रणका लागि ध्यानाकर्षण गराउन केही दिनअघि पूर्वसभामुख तथा एमाले उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङसँगै भट्टराई बालुवाटार पसेका थिए। त्यति बेला देउवाले मास्क लगाएका थिए। नेम्वाङले मुखमा मास्कबाहेक हातमा सेता पञ्जा पनि लगाएका थिए। योगेश भट्टराईको मुख खुल्लै थियो।
यो दृश्य सामाजिक सञ्जालमा छताछुल्ल भएपछि आम आक्रोशको तारो बने भट्टराई। ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजनले त ‘मुखमा हैन खुट्टामा मास्क लगाएको’ भन्दै लाजमर्दो ट्वीट गर्‍यो। त्यो ट्वीट एउटा समाचार माध्यमलाई पटक्कै सुहाउने खालको थिएन। त्यो भन्दा पनि नसुहाउँदो काम त भट्टराईले नै गरे। तर, उनले ‘ज्ञापन पत्र वाचन गर्दा मास्क खोलेको’ स्पष्टीकरण दिएर आफ्नो बचाउको प्रयास गरे। आफ्नो हुस्सुपनको बचाउ गर्नुभन्दा गल्ती स्वीकारेको भए राम्रो हुन्थ्यो। यस्तो जोखिमको बेलामा बोल्दा किन मास्क खोल्नु? अथवा ज्ञापन पत्र वाचन गरेर किन जोखिम निम्त्याइरहनु? नगर्नु गल्ती गरेपछि सामाजिक सञ्जालमा रूप र सारको भद्दा व्याख्या किन गरिरहनु?
हिजोआज सामाजिक सञ्जालमा कोरोनासँग सम्बन्धित एकैखालको विज्ञप्तिको बाढी आएको छ। केही दिनअघिसम्म ‘मास्क लगाए पाप लाग्छ’ भनेझैं जात्रा, मेला, पर्व, भोजभतेर, सम्मेलन, अधिवेशन, आन्दोलन, गोष्ठीमा भाग लिएका तस्बिरहरु निसंकोच पोष्ट गर्ने अगुवाहरुको विज्ञप्तिको भाषा यति बेला लगभग एउटै छ। मास्क नलगाई ‘कोरोना बम’ बनेर यत्रतत्र डुल्नुसम्म डुलेर दुनियाँलाई जानीजानी संक्रमित बनाएकाहरू नै सामाजिक सञ्जालमा लेखिरहेछन्– ‘पूर्ण रूपमा सचेत रहँदा रहँदै पनि कोरोनाको यो लहरबाट बच्न सकिएन। मसंग सम्पर्कमा आउनेहरुले सावधानी अपनाउनुहोला।।’ यति लेखेर अन्तिममा जयनेपाल! लालसलाम! को फुँदो पनि गाँसिएको यदाकदा देखिएको छ।
कति रमाइलो! कोरोना सल्काउनुसम्म सल्काएपछि ‘सचेत रहनुहोला’ रे! मास्कसँग नाता तोडेर ‘पूर्ण रुपमा सचेत हुँदाहुँदै’ रे। यसो गर्नेमा सांसद, मन्त्री, सानाठूला सबैखाले दलका अध्यक्ष, उपाधक्ष्य, महासचिव, सचिव मात्र हुन् र? पत्रकार, नागरिक अगुवा, प्राध्यापक, व्यापारी सबै छन्। कोहीभन्दा कोही कम छैनन्।
नेपालमा कोरोना फैलाउन सबै मिलेर मरिहत्ते गरिरहँदा ओमिक्रोन संसार भ्रमण गर्दै हिँडेको थियो। नेपालले दिल खोलेर ह्वाङ्ग मुखका साथ उसलाई स्वागत गर्‍यो। छिटोछिटो फैलाउन रहर गरेझैं ठूलाठूला आमसभाहरु गरिए। कोरोना फैलाउन मरिहत्ते गर्नेहरुले मास्कलाई सपक्क लगाउने चिज नभएर यस्सो भिर्ने वस्तु सम्झिए। स्यानिटाइजर त कता फाले फाले। जूमलाई पनि जुम्सो माने। ठेगाना भुलेझैं गरे।
पृथ्वीनारायण शाहको सम्मानमा घरमै बसेर पनि सम्झन सकिन्थ्यो। घरमै फोटो राखेर सम्मान गर्न र सो पृथ्वी जयन्ती मनाउने दिन आउनुृभन्दा पहिल्यै सरकारले २५ जनाभन्दा बढी भेला नहुन अनुरोध गरिसकेको थियो । त्यो अनुरोधलाई पूर्वराजादेखि राष्ट्रपतिसम्म सबैले लत्याए । भीडभाड नगरिकन पनि पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्झन सकिन्थ्यो । डिजिटल माध्यम प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो । राष्ट्रपति निवासभित्र माल्र्यापर्ण गर्नपनि मिल्थ्यो । समाचार आइहाल्थ्यो । झन् ठूलो समाचार बन्थ्यो। मकरमेलामा नरोकिएका पूर्वराजा सिंहदरबार अगाडि पुग्न केले रोकिन्थे? गृह मन्त्रालयको सर्कुलर भुलेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी आफैं महोत्सव उद्घाटनमा हिँडे। कोरोनासँग बहादुरीपूर्वक भिड्नु नै सबैको साझा अजेण्डाजस्तो बन्यो। परिणाम हाम्रासामु छ। पूर्ण रूपमा अचेत हुनेहरुले नै सचेत भएको विज्ञप्ति छापिरहेका छन्। भेला, मेला र भोजभतेर नरोकिए पनि सचेत हुन त सकिन्थ्यो।
आफ्ना आफन्त, इष्टमित्र, साथीभाइलाई कोरोना लाग्दै लाग्दैन भनेझैं गरेर मास्क नलगाई हुलको हिस्सा बन्ने, अलग्ग बस्न खोज्नेलाई पनि हुलमा तान्ने अनि ‘म पूर्ण सचेत रहँदा रहँदै पनि कोरोना लागिहाल्यो, त्यसैले सचेत हुनुहोला’ भन्न कहाँ पाइयो?
मकर मेला, माघी मेला, नयाँ वर्षको उत्सव, पृथ्वी जयन्ती, महाधिवेशन, चुनाव, विवाह, मृत्यु संस्कार, गोष्ठी, भेला, घुमघाम, खानपिन, तालिम, वार्षिकोत्सव, साधारण र असाधारण सभा सबै हाम्रा जीवनका अभिन्न हिस्सा बनिसके। कोरोना पनि हाम्रै वरिपरि फन्फनी घुमिरहेको छ। घरै बसेर जिन्दगी चल्दैन। चुलो पनि बल्दैन। त्यसो भएपछि ह्वाङ्ग मुख अभियन्ता किन बन्ने? ह्वाङ्ग मुख अभियन्ता बनेर संक्रमित बनेपछि/बनाएपछि ‘पूर्ण रूपमा सचेत थिएँ’ भनेर मुखभित्रकै एउटा जिब्रोले अर्को जिब्रो खोज्ने अवस्था किन ल्याउने?
ह्वाङ्ग मुख अभियन्ता नबनौं। नत्र त मुखमा हैन, खुट्टामा मास्क लगाएको भन्दै ग्यालेक्सी टेलिभिजनले योगेश भट्टराईलाई मात्र हैन, अरुहरूलाई पनि जिस्क्याउन थाल्नेछ। त्यसो भएपछि रूप र सारको निरर्थक बहसमा उत्रिनुपर्ने मात्र होइन, कोरोनाको दुर्दशा झेल्नुपर्ने अवस्था पनि आउँछ।
ह्वाङ्ग मुखले केही जित्नेवाला छैन। मुख थुनौं। कोरोनाका कारण नेताहरूको मुख थुनिँदा देशले सञ्चो मान्ने अवस्था किन आयो? घर बसाइमा सबै नेताले चिन्तन मनन पनि गर्नेछन् भन्ने आशा पनि गरौं।
(२०७८ साल माघ ३ गते नेपाल लाइभ डटकममा प्रकाशित लेखलाई सामान्य परिमार्जन गरिएको)
आवाजी द्वीप र ह्योगो प्रान्तको दक्षिणी भागमा अवस्थित कोबे शहरको बिचमा सेतो अन्तरसागरको ४ किमि चौडा ‘आकाशे जलाशय’ रहेको छ। सन् १९९८ मा करिब ३९०० मिटर लम्बाइको झोलुङ्गे पुलले कोबे र आवाजीलाई स्थलमार्गसँग सिधा जोडेको हो। जापानको प्राचीन मिथकमा सबैभन्दा पहिले सृष्टि भएको भूमि यही आवाजी द्वीप हो। यो टापुमा भूकम्पको ‘नोजिमा दरार’ दौडन्छ र सन् १९९५ को महाभूकम्पको केन्द्रविन्दु कोबे शहरको ठीक दक्षिणतर्फ आवाजीको उत्तरपूर्वी तटीय भागमा यही दरारमा थियो। यसैले उत्तरपूर्वी भेगका आवाजी नगरपालिका र अन्य ससाना शहरबस्तीमा भूकम्पको ज्यादा असर परेको थियो।
जापानको बस्ती संरचनाको तहगत स्वरुपलाई ‘सि-चो-सोन’ अर्थात ‘शहर-बजारबस्ती-गाउँ’ तीन किसिमले विभाजन गरिएको छ। नेपालको हालको संरचनाबाट हेर्दा जनसंख्या र क्षेत्रफलका हिसाबले महानगरपालिका/उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकासँग तादात्म्यता राख्दछ। आवाजीमा हाल तीन नगरपालिका छन्। तोसिमा बस्ती होकुदान-चो अन्तर्गतको परम्परागत रुपमा माछा मारेर जीविका चलाउने समुदायको एक ग्रामीण बजारबस्ती हो। यहाँ होकुदान-चो को पालिका कार्यालय र माछा व्यवसायी संघको केन्द्रीय कार्यालय पनि छ। पुनर्निर्माणको काम चल्दै गर्दा सन् २००५ बाट होकुदान-चो आवाजी नगरपालिकामा गाभियो।
सन् १९९५ को भूकम्पमा तोसिमा बस्तीका ९१७ घरमध्ये ६६९ वटा घरमा ठूलो क्षति पुगेको थियो। भूकम्पको समयमा यो बस्तीको तथ्यांक निम्नानुसार रहेको पाईन्छ (होकुडान-चो, १९९७)।
-जग्गाधनी : ६६०
-मोहीको संख्या : ०
-भाडामा लगाईएका घर : १२०
-जम्मा घरधुरी संख्या : ६०२
-प्रभावित घर : ५०६ (८४ प्रतिशत)
-जनसंख्या : १,६७४
पुनर्निर्माण सम्बन्धी पहल
भूकम्प गएलगत्तै होकुदान-चो को तोसिमा बस्ती इलाका नगर योजनाका ऐन नियमले नसमेटेको ग्रामीण बजारबस्ती क्षेत्रको रुपमा थियो। सो समयमा यो क्षेत्रका भवन निर्माणलाई नियन्त्रण गर्ने कानून थिएन र पुनर्निर्माणका लागि नगरपालिका क्षेत्रमा लागू हुने भू-पुन:समायोजन कार्यक्रम पनि लागू गर्न नसकिने स्थिति थियो। तर, भूकम्प गएको तीन हप्तापछि होकुदान-चो ले तोसिमा बजारलाई शहरी योजना क्षेत्रमा समावेश गरी भवन निर्माण नियन्त्रण मापदण्ड लागू गर्‍यो। सरकारबाट सहायता प्राप्त गर्नका लागि नगरपालिकामा लागू गरिने यी नियमहरु उपयोग गरि पुनर्निर्माणमा सरकारको पर्याप्त वित्तीय सहयोग प्राप्त गर्न यसो गरिएको थियो। फलस्वरुप भूकम्प गएको एक महिनापछि १७ फेब्रुअरीमा होकुदान-चोले भूकम्पले बढी क्षति पुर्‍याएको र तुरुन्त पुनर्निर्माण कार्य गरिहाल्नुपर्ने क्षेत्रका लागि भू-पुन:समायोजन सम्बन्धी कानुन पास गर्‍यो र साथसाथै भूकम्पअघि नभएका विभिन्न प्रशासनिक र कानुनी संयन्त्र पनि छिटोछिटो निर्माण गर्‍यो।
योजना परामर्शदाता समिति गठन भएसँगै सो समितिले १७ मार्च, १९९५ मा पहिलो चरणको भू-पुन:समायोजन तथा बस्तीका प्रमुख सडकहरुको निर्माण सम्बन्धी निर्णय गर्‍यो। आवाजी टापुका भूकम्प प्रभावित बस्तीहरुमा पुन:समायोजन लागू गरी पुनर्निर्माण गरेको बस्ती यही तोसिमा मात्र हो। अन्य बस्तीमा शहर निर्माण र सुधारसँग सम्बन्धित अरु विधा र कानुनी संयन्त्रहरु प्रयोग गरिए।
२०.५ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको यो बजारबस्ती क्षेत्रको भू-पुन:समायोजन गर्ने गरी सुरुवाती पुनर्निर्माण योजना तयार गरियो। भू-पुन:समायोजनका लागि ह्योगो प्रान्तीय सरकारले सुरुवाती चरणमा तयार गरेको योजनामा सडकहरु सिधा वर्ग सञ्जाल (अर्थोगोनल ग्रिड प्याट्रन) मा आधारित थियो, जसमा बस्ती परिसरलाई चारपाटे चाकल-चाकलमा छुट्याएको थियो। तोसिमा बस्तीको तटीय किनारा भएर जाने प्रान्तीय राजमार्गलाई थप चौडा गरी पैदलयात्रुको सुविधाका लागि फुटपाथ पनि बनाउने र सबै घरहरु ६ मिटर चौडा सडकले जोडिने योजना यसमा थियो।
योजनामा ससाना उद्यानहरु सबै टोलमा बनाईने कुरा समेटिएका थिए भने सडकको छेउछाउमा निर्माण गरिने अरु ससाना दुने बाटिका (पकेट पार्क) पनि यो बस्तीको पुनर्निर्माणपछिका विशेषता हुने उल्लेख गरिएको थियो। यसरी बस्तीको नयाँ संरचनामा सबै स्थल र घरघघरमा सहज पहुँच, आगलागी नियन्त्रणमा सहजता र विपद्का बेलामा आवश्यक खुला क्षेत्र उपलब्ध हुनेजस्ता सुविधा योजनामा समावेश थिए। अन्य शहरको विकास कार्यक्रममा जस्तै यहाँ पनि हरेक घरधनीले घडेरीको केही प्रतिशत बस्ती विकासका लागि योगदान गर्नुपर्ने थियो। यी सबै योजना निर्माण प्रक्रियामा स्थानीयवासीको सहभागिताचाहिँ भएको थिएन।
त्यसपछि पुनर्निर्माण अघि बढाउनका लागि पुनर्निर्माण परामर्श समिति गठन भयो। सो समितिले आफ्नो कार्यालय स्थापना गरी फ्रेबुअरी-मार्च, १९९५ मा परामर्शको काम थाल्यो। होकुदान-चोसँग पुनर्निर्माण अघि बढाउन आवश्यक प्राविधिक तथा प्रशासनिक जनशक्ति नभएकाले यी सबै कामका लागि प्रान्तीय सरकारले नै पहल गरेको थियो। साथै पुनर्निर्माणका लागि स्थानीय समुदायको सहभागिता अपरिहार्य भएकोले टोलबस्ती सामुदायिक संघ गठन गरियो। यसले तोसिमा बस्ती पुनर्निर्माण सम्बन्धी आफ्ना ३ वटा लक्ष्य निर्धारण गर्‍यो।
१. समुदायका सबै घरपरिवार यथावत रुपमै यस बजारबस्तीमा बस्ने।
२. बस्तीबजारको जनसंख्या अरु बृद्धि हुने वातावरण निर्माण गर्ने।
३. एक जीवन्त बजारबस्ती निर्माण गर्ने।
जनसमुदायको भूमिका र ‘तोसिमाको माया लाग्छ’ अभियान
भू-पुन:समायोजनबारे अनभिज्ञ स्थानीयवासी सडक फराकिलो पार्न र सामुदायिक स्थलहरु निर्माणका लागि आफ्नो घडेरीको अंश कटौती गर्नुपर्ने कुरा बुझेपछि निराश र दुखी भए। यदि कसैको १०० वर्ग मिटरको घडेरी छ र बाटो बिस्तारको लागि जग्गा काट्नुपर्ने हो भने जग्गा धेरै घट्ने र घर बनाउन अप्ठेरो पर्ने अवस्था आउने भयो भनेर उनिहरु चिन्तित भए। विशेष रुपमा प्रान्तीय मार्गलाई अरु चौडा बनाउँदा जाने जग्गाको कारणले पनि नयाँ योजना त्यति ग्राह्य भएको थिएन। यसमाथि अर्को समस्या के थियो भने समुदाय आफैं पनि दुइ समूहमा बाँडिएका थिए। बस्तीको पूर्वतर्फको इलाकामा बढी क्षति भएकोले उक्त योजनामा सहमति जनाएमा पुनर्निर्माणमा सरकारी सहयोग पाउन सक्ने हुँदा उनीहरुलाई बढी स्वीकार्य थियो भने पश्चिमतर्फ कम क्षति भएकाहरु त्यसको विरोधमा उत्रिएका थिए। (www.bosai.go.jp,2018)
अर्कोतर्फ प्रस्तावित भू-पुन:समायोजन योजना तोसिमाको सडक र बस्तीको बान्की पूरै खल्बल्याउने खालको थियो। भूकम्पमा क्षति नै नभएका घर पनि यो योजनाले भत्काउने देखियो। फेरि पहिलेदेखि भएको बस्तीको बनोटमा बस्तीभित्रका सबै गल्ली र बाटाहरु बस्तीको मध्यभागमा रहेको समुन्द्रतटस्थित डुंगा अड्याउने ठाउँतिर सोझिन्थे। बस्तीभित्रका सबैजसो गल्लीहरु दुई मिटरभन्दा कम चौडाइका थिए। प्रस्तुत पुनर्निर्माण योजनामा यी सबै गल्लीहरु मेटिइ बस्तीका सबै बाटाहरु चारैतिर दोहोरो गाडी गुड्ने सडक सञ्जालले बन्ने भएको थियो। त्यसकारण प्रान्तीय सरकारद्धारा अघि सारिएको यो योजनामा स्थानीयवासीको सहमती हुन सकेन। यसपछि उनीहरुले ‘तोसिमाको माया लाग्छ’ नामक अभियान अघि बढाए र भू-पुन:समायोजन योजनाको संगठित रुपमै विरोध गरे।
‘तोसिमाको माया लाग्छ’ अभियानको प्रभावले सरकार शुरुवाती योजना परिमार्जन गर्न सहमत भयो। टोलबस्ती विकास समितिसँगको परामर्शमा हरेक घरधुरीको समस्या समाधान हुने गरि १२ पटकसम्म नक्सा परिमार्जन हुन गयो। योजना परिमार्जनका क्रममा योजनाले जग्गा काट्दा असाध्यै साना घडेरी भइ घर बनाउन अप्ठेरो परेका स्थानीयवासीका लागि एक सामुदायिक आवास भवन बनाउने प्रस्ताव गरियो । अन्तिम परिमार्जन गरेर भू-पुन:समायोजन योजना सन् १९९६ मा प्रान्तीय सरकारलाई बुझाई १९९७-९८ मा सो प्रस्ताव पास भयो। यसै क्रममा बस्ती पूर्वतर्फको बढी क्षति भएको इलाकालाई पहिले नमुनाको रुपमा भू-पुन:समायोजनको काम अगाडी बढाउने तरिका अपनाईयो। यी स्थानमा बनेका नयाँ घर देखेपछि पश्चिमतर्फका र विरोध गर्ने अरुहरु पनि भू-पुन:समायोजनको कुरामा अलि नजिक आउन थालेको अनुमान पनि गरिन्छ।
भू-पुन:समायोजन गरि सडकको पहुँच अभिबृद्धि गर्ने, उद्यान र खुला ठाउँ बनाउने, पहिलेदेखिका बाटा-गल्लीको धारलाई यथासम्भव कायम गर्ने तथा विपद्-लचिलो संरचना बनाई शहरी सुविधासहितको बस्ती निर्माण गर्ने लक्ष्य यो संशोधित पुनर्निर्माण योजनाले लिएको थियो। यसरी बनाइएको दोस्रो चरणको योजनामा सडकको वर्गीकरण निम्नानुसार गरिएको छ।
– बजारबस्ती भइ जाने प्रान्तीय राजमार्ग : १४—१५ मिटर
– शहरबस्ती सडक : ४.५ — ११ मिटर
– पैदलयात्रुका लागि बनाईएको बाटो : २—४ मिटर
परिमार्जित योजना अनुसार पुराना सडक संरचनाहरुको मर्मतसम्भार गरिनुका साथै सडक फराक पनि बनाईयो। सडकको रेखा निर्धारण गर्दा घरधनीहरुसंगै वार्ता गरेर निर्णय गर्नुपर्ने थियो। लामो समयको छलफल र बहसपछि सडक सञ्जाल पटकपटक परिमार्जन गरियो। अन्तमा तीन किसिमका सडक र उद्यान सहितको योजना सन् २०१० मा बल्ल पारित गरिएको थियो। हरेक घरधनीसँग सम्झौता गर्दै बाटो निर्माण गरिएकाले तोसिमाका सडकहरु एकनासका र सिधा छैनन्, ठाउँठाउँमा नागबेली पनि परेका छन्। टोलभित्रका सडकहरु चाहि पुरानै धार (अलाइनमेन्ट) मा आधारित भइ घटीमा चार मिटर चौडाइका छन्। अप्ठेरो परेको बेलामा यातायातका साधन प्रवेश गर्न सकून् भन्ने उद्देश्यले घटीमा चार मिटर चौडाइ कायम गरिएको हो।
मूल सडक राजमार्ग बाहेक अरु सडक घरधनीसंग भएका सम्झौता अनुरुप नै निर्माण गरिएका थिए। केही व्यक्तिहरुले यो योजना कार्यन्वयनका क्रममा आफ्नो घडेरी कटौती गर्न अस्वीकार गरे। यस्तो परिस्थिति आउनुमा विविध कारण उल्लेख गरिएका छन्। बाटोतिर फर्केको उनिहरुको घरमा या त क्षति पुगेकै थिएन या उनीहरुले बाटो बिस्तारमा योगदान गर्नुभन्दा हटन (सेटब्याक) पालनाको विकल्प रोजे। यो हुँदा बाटोको किनारा रेखाकंन अर्को दिशामा सर्न पुग्यो, जहाँ खाली जग्गा थियो। यसकारण सडक नागबेली बन्न पुग्यो। यस्ता घरको पछि कुनै समयमा पुनर्निर्माण गरिँदा अहिलेको सडक-गल्ली किनाराबाट दुई मिटरपछि हटेर निर्माण गर्नुपर्ने नियम बनाइएको छ।
सानो घडेरीका कारण घर बनाउन असमर्थ घरधनीहरुका लागि उपर्युक्त सट्टाभर्ना घडेरीको व्यवस्था गरिएको थियो। कोबेको सिन-नागाता र तोसिमा बस्तीको योजना बिच देखिएको एउटा महत्वपूर्ण फरक के हो भने तोसिमामा एक लेनमात्र चौडाइ भएका सडक बनाईएका छन् र त्यसको रेखांकन गर्दा हरेक घरधनीसँग सम्झौता गरिएको छ। यसले खुला ठाउँका लागि आवश्यक जग्गा बचाएको छ भने पूर्वाधार विकासको खर्च पनि कम भएको छ। सँगसँगै परम्परागत बस्तीको स्वरुप संरक्षण भएको छ। यसले गर्दा समग्र बजारबस्ती दृश्य र स्थानीयपनका दृष्टिले वस्तीलाई आफ्नो चिनारी दिएको महसुस हुन्छ।
मूल सडक (प्रान्तीय राजमार्ग) निर्माण सुधारका क्रममा स्थानीय डुंगा निर्माण कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको एउटा जग्गामा सडक बिस्तारमा सहमत नभइ समस्या आएकोले परियोजना समयमै सम्पन्न हुन सकेन। यसले गर्दा त्यतातर्फ नियोजित गरि सट्टाभर्ना घडेरी पाएका घरपरिवारलाई पनि असर पर्यो। योजनाअनुसार सडकको नयाँ प्रस्तावित रेखाअनुसार ती घडेरीमा प्रवेश गर्न सकिने थियो। अन्तमा अरु उपाय नलागेर योजना कार्यान्वयनका लागि सरकारले बल पनि प्रयोग गर्नुपर्‍यो। पुनर्निर्माण योजना बनाउँदा घरधनीसंग समयमा नै गर्नुपर्ने परामर्शको अभावमा यस्ता घटनाहरु हुन पुगे।
स्थानीय इलाकाको पुनर्निर्माण कार्यलाई सहयोग पुर्‍याउन आावाजी नगरपालिकाले आफ्ना घर बनाउन असमर्थ स्थानीयवासीका लागि आवास एकाईको निर्माण गर्‍यो। पुनर्विकास गरिएका बजारबस्तीमा निजी आवास निर्माणको खर्च बाहेक पुनर्निर्माण कार्यमा कुल १७ अरब जापानी ऐन खर्च भएको अनुमान छ। (Hokudan-cho, 1997)
पुनर्निर्माणअघि तोसिमा बस्तीमा प्रवेश गर्ने प्रमुख सडकको रुपमा नाकामिची रहेको थियो। पुरानै धार लिएर बिस्तार गरिंदा तथा दुवैतिर फुटपाथ राखिँदा यसको चौडाइ आठ मिटर कायम भयो (चित्र ४-८)। यो सडक अहिले दुई लेनको छ। यो सडक बनाउँदा पनि घरधनीहरुको अलग-अलग सम्झौताको कारण सिधा नभई केही नागबेली भएको छ। बजारबस्तीका घर अगाडीबाट जाने पहिल्यैदेखिको प्रमुख बाटो पुनर्निर्माणमा ‘सामुदायिक पथमार्ग’ को अवधारणा अघि सारिएको थियो। ‘सामुदायिक पथमार्ग’ को लक्ष्य बस्तीका सबै घरपरिवारलाई सुरक्षित, हरित र पैदलमैत्री वातावरण दिई शान्त र मनोरम बस्तीको निर्माण गर्नु हो।
बस्तीको छेउछाउमा चार वटा सामुदायिक उद्यान र सडकको छेउछाउमा १६ वटा दुने वाटिका (पकेट पार्क) निर्माण गरिएका छन्। ती दुने वाटिकामा ‘जिजो’ देवगणका टोल देवस्थल पनि छ। सामुदायिक सडक-नाकामिचीमा पनि टोल देवालय बनाईएको छ। अधिकांश उद्यानहरु देवालय वा देवस्थल नजिक हुने गरी बनाइएका छन्। मन्दिर र उद्यानसँगै हुँदा यसले वातावरणमा थप जीवन्तता ल्याउन सघाउ पुर्‍याएको छ। यी उद्यानहरु विपद्को बेलामा खुला क्षेत्रको रुपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। पार्कमा पानीको सानो कुण्ड बनाइएको छ।
(वास्तुकलाका प्राध्यापक डा. मोहनमूर्ति पन्तको लेखन र मेरो अनुवादमा प्रकाशोन्मुख पुस्तक ‘महाभूकम्पपछिको पुनर्निर्माण : जापानको अनुभव’ को अंश)।
(२०७८ साल कार्तिक २३ गते मंगलबार नेपाल लाइभ डटकममा प्रकाशित)
Posted bymilanbagale November 8, 2021 Posted inUncategorizedLeaveacomment on पुस्तक अंश : आवाजी द्वीपका ग्रामीण बजारबस्तीको पुनर्निर्माण